🥇 ▷ Soo bandhigida afar blues si ay u iibsadaan taleefanno lacag la’aan ah ✅
Soo bandhigida afar blues si ay u iibsadaan taleefanno lacag la’aan ah
Waxaan jeclahay taleefannada gacanta ee bilaashka ah. Xaqiiqdii anigu isma arki karo anigoo wata taleefanka gacanta oo leh astaan ​​shirkadeed ama xiran. Xaqiiqdii, hadaan haysto dariiqaas, Weligey iibsan maayo mid kale si aan u isticmaalo shaqsi ahaan. Mobillada bilaashka ah waa moobilada aan inta badan u doorto sidii aaladayda maalinlaha ah sababtoo ah ma bixiyaan oo keliya qiime cajiib ah, laakiin waxay ka buuxaan lacago dheeri ah oo laga yaabo inaadan ogaan karin ilaa uu qof tilmaamo mooyee. Tani waa sababta ay tahay inaad iibsato Mobiles bilaash ah.
Cusbooneysiinta deg degga ah, nabadgelyada ka fiican iyo qalab yari yar
Faa’iidada moobilada mobilada waa kan, marka laga reebo taleefannada sumadda sumadda leh oo si cad loo calaamadeeyay, ma laha astaan ​​waxayna ka madax bannaan yihiin dalabyo badan oo ay ku rakiban yihiin hawl wadeyaasha iyo xaddidadaha la socda mobilada aad ka iibsan laheyd dukaanka tafaariiqda. Tilmaamaha ay shirkaduhu horay ugu shubtaan taleefannada mobilada, sida barnaamijyada aadan ka saari karin iyo taleefannada caado u leh, waxay ka hor istaagaan soo-saareyaasha taleefanka inay si toos ah ugu soo saaraan cusbooneysiinta taleefannada.
Taas oo macnaheedu yahay in halkii shirkad sida Samsung ah oo bixinaysa cusboonaysiinta amniga, waa inaad aamintaa bixiyahaaga. Hawl wadeennadu marar dhif ah ayey siiyaan taleefannadooda waqtigooda, taas oo macnaheedu yahay in taleefannadan xiran aysan kaliya heli doonin muuqaalo cusub mar dambe, laakiin sidoo kale waxay heli doonaan hagaajin amni oo muhiim ah goor dambe (haddii ay sameeyaan).
Helitaanka taleefan aan xirneyn oo aan xirneyn wuxuu dammaanad ka qaadayaa inaad heli doontid dhammaan barnaamijyada softiweeryada iyo xirmada amniga isla markaaba soo saaraha taleefanka.
Waad baddali kartaa taleefankaaga markasta oo aad rabto
Moodooyinka cusub ee taleefannada waxaa loo soo bandhigayaa wareegga sanadlaha ah. Laakiin haddii aad saxiixday heshiis 24-bilood ah, ma heli kartid taleefanka cusub iyo kan ugu wanaagsan haddii aadan bixin inta ka hartay heshiiska, oo shirkadaha badankood waxay kugu dallacaan khidmadda bixitaanka sare.
Waad beddeli kartaa heerkaaga markasta oo aad rabto
Sababta oo ah inaadan qandaraas 24-bilood ah la laheyn taleefoonka gacantu, waad baddali kartaa qorshahaaga-SIM-ka markasta oo aad rabto. Qorshayaasha badankood waxaa si joogto ah loo bixiyaa 1 bil ama 12 bilood. Iyo maadaama taleefankaagu uusan lahayn SIM oo uu xirmayo gebi ahaanba, uma baahnid inaad la joogtid isla hawl wadeenka mobilada, waxaad ku baddali kartaa xiriiriyaha shabakadaada sida bixiyaha awoodaada isku baddelo, hadii heshiis fiican uu yimaado.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto inaysan midkoodna gargaarkan kor ku xusan ahayn waxyaabo aad si fudud uga dhex bixi karto heshiiska shabakadda dhaqanka. Haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso, waa inaad sugtaa illaa ay ka oggolaanayaan ama bixiyaan mudnaanta. Haddaad rabto inaad beddelato hawl wadeenkaaga moobaylka, waxaad ku gabagabeynaysaa bixinta ajuurada bixitaanka maxaa yeelay markii aad iska qorto heshiis taleefan, waxaad asal ahaan ku raacsan tahay inaad bixiso qiimaha oo dhan, ha ahaato illaa 24ka bilood oo dhan iyo haddii kale.
Waxaan u maleynayaa inaad la xiriiri karto dhammaan tusaalooyinkaan, maxaa yeelay kuwan waa xaalado aan dhammaanteen ku soo aragnay macaamiisha iyo isticmaaleyaasha taleefannada casriga ah.